गोरखा जिल्ला संघका ‘ठेकेदार’ नेतालाई प्रश्नः अध्यक्ष र महासचिव बनेको आफ्नै व्यवसायीमाथि हातपात गर्न हो ? धिक्कार्दैन यो पद–कुर्सीले ?
पक्राउ परेका सुनारलाई अध्यक्ष र महासचिवले नै भगाए, प्रहरीले पनि दियो ‘गुण्डागिरी’लाई साथ !
निर्माण सञ्चार, ठेकेदारी प्रथा र गुण्डागिरीः समाचार टिप्पणी । नेपालको निर्माण उद्योगमा रहेको सिन्डिकेटको पछिल्लो कडी बन्न पुगेको छ गोरखा ठेक्का प्रकरण ।
यातायात सिन्डिकेट विरुद्ध आमजनताको मौन समर्थनले सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीले ‘घुँडा’ टेकेकै बेला गोरखा पालुङटार नगरपालिकाको कार्यालयमा शुक्रबार टेन्डर फारम दर्ता गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीका नेताले आफ्नै पेसामा संलग्न स्वतन्त्र व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेको घटना यतिबेला बहसको विषय बनेको छ ।
देख्दा सानो जस्तो लागेपनि, यो परिघटनाले एकपटक निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष शरद गौचनको मृत्यु प्रकरणलाई सम्झाएको छ ।
किनकि, ‘ठेकेदार’हरुमा रहेको यही ‘गुण्डागर्दी’ उत्कर्ष थियो गौचनको गोली हानी भएको मृत्यु ।
गुण्डागर्दीको जग थियो टेन्डरमा सिन्डिकेट र यसै गरी टेन्डर फारम लिएर जाने माथि हुलहुज्जत र हमला गर्ने ठेकेदारले जन्माएको प्रथा ।
फारम भर्न जाँदा कुट्ने छुट तपाईलाई कसले दियो अध्यक्ष–महासचिवज्यू ?
कुनै पनि संस्था व्यक्तिको पेवा नभई सामूहिक हित रक्षाको वैधानिक थलोका रुपमा लिइन्छ । तिनका अध्यक्ष र महासचिव व्यक्ति नभएर संस्थाकै रुपमा हेरिने गरिन्छ ।
तर, नेपालमा चल्दै आएको परम्परागत ‘ठेक्का’ प्रथाले निर्माण व्यवसायीलाई न त प्रोफेसनल बनाएको छ, न उनीहरुले आफूलाई सम्मानजनक पेसाकर्मीकै रुपमा उभ्याउन सकेका छन् ।
उनीहरु निर्माण व्यवसायी नबनेर हेय दृष्टिकोणले हेरिने ‘ठेकेदार’ बन्नुमा गोरखाको गुण्डागर्दी शैली नै प्रमुख कारण हो ।
यो सत्य एक पटक फेरि पनि बुझ्ने कोसिस गर्ने हो कि गौचन प्रकरणलाई नै जिल्ला जिल्लामा संस्थागत गर्दै जाने हो यो जिम्मा गोरखा जिल्ला संघका अध्यक्ष र महासचिव जस्ता ‘भाग्यमानी’का हातमा छ ।
वास्तवमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रहेर गरिने जनताको र सरकारको दायित्वमाथि सिन्डिकेट गर्न, आफूले भने जस्तो व्यक्ति नआउँदा कुट्न र पिट्न कुन ऐन कानुनले छुट दिएको छ ?
यो प्रश्नको जवाफ गोरखा जिल्लाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ र महासचिव सूर्य भण्डारी नेतृत्वको टोलीले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
कृपया दश पटक सोच्नुहोला छातीमा हात राखेर !
उनीहरु जस्तो निर्माण व्यवसायीहरु, जो गुण्डागर्दी पनि नछाड्ने सुरक्षा पनि भएन भन्न भन्दै सरकार गुहार्ने गर्छन, उनीहरुलाई सुरक्षा भएन भन्ने नैतिक आधार पनि छैन । यो लाजमर्दाे कुरा हो ।
अध्यक्ष र महासचिवज्यू, किन कुटियो व्यवसायी, किन भगाइयो अभियुक्त ?
शुक्रबार पालुङटार नगरपालिकाको कार्यालयमा टेनडर फारम दर्ता गर्न जाँदा एक निर्माण व्यवसायी आफ्नै संघका नेताहरुको कुटपिटको सिकार बन्न पुगे ।
निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ र महासचिव सूर्य भण्डारी नेतृत्वको टोलीले उनीहरुमाथि कुटपिट गरेको प्रहरी स्वयम्ले नै पुष्टि गरेको छ ।
पालुङटार नगरपालिका(वडा नम्वर ९ मा बन्ने वडा कार्यालय भवन र राधाकृष्ण बारपिर्के ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का खुलेको थियो ।
७८ लाखको भवन र ७७ लाखको सडक स्तरोन्तिका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले राजन सुनारलाई पक्राउ गर्यो ।
तर, दुर्भाग्य, पक्राउ परेका राजन सुनार प्रहरी कार्यालयबाटै फरार हुन पुगे ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सुनार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाबाटै फरार भएपछि स्थानीले प्रहरीकै मिलेमतोमा अभियुक्तलाई भगाएको आरोप लगाएका छन् ।
कुटपिटको अगुवाइ गर्ने गोरखा जिल्ला संघका अध्यक्ष महासचिवले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता रहँदरहँदै पनि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
उल्टो उनीहरुकै अगुवाइमा प्रहरी भित्र पनि ‘सेटिङ’ गर्दै दोषीलाई उम्काउने काम गरेको स्रोतले बताउँछ । प्रहरीले सोही दिन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै सुनार र अन्य केही व्यक्तिहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएका थिए ।
सुनार त्यहीँबाट फरार भएका हुन् ।
स्रोत अनुसार, पीडितले कुटेपछि आफूलाई ४ घण्टा बन्धक बनाएको बताएका छन् ।
निर्माण सञ्चार गोरखा संवाददातासँग बोल्दै पीडित राम थापाले भने, ‘म १० बजेतिर ठेक्काका लागि फारम दर्ता गराउन गएँ । पालुङटार नगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा नपुग्दै जिल्ला संघ गोरखाका अध्यक्ष श्रेष्ठले फोन गरेर बाहिर बोलाउनुभो । बाहिर आएर भेट्दा यति ठूलो ठेक्का छ मिलेर जानुपर्छ पनि भन्नु भएको हो ।’
थापा वर्ल्ड वाइड कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हुन् ।
थापाले भने, ‘म केही साथी पनि थियौं । फारम दर्ता गराउन गयौं । फारम बुझाउने ठाउँमा एक जना अर्काे केटा पनि रहेछ । उसले सबैभन्दा पहिले नै सोध्यो, ‘संघबाट हो कि बाहिरबाट ? यस्तो सोध्ने काम भयो ।’
उनले अघि भने, ‘मैले संघबाट होइन भनेपछि फारम दर्ता गराउन पाउनुहुन्न नहाल्नुस् भन्दै पेल्ने काम भयो ।’ उसले पेलापाल गरे पनि आफूहरुले फारम दर्ता भने गराउन सफल भएको थापाको भनाइ छ ।
थापाका अनुसार फारम दर्ता पछि फेरि गोरखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्षले फोन गरेर कार्यालय नजिकैको होटलमा बोलाएका थिए ।
थापा जब होटेलमा पुगे त्यहाँ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिवसँगै २०–२२ जना केटाहरु पनि थिए । त्यसपछि सुरु भयो गुण्डागर्दीको असली रुप ।
अध्यक्ष र महासचिवकै निर्देशनमा थापालाई कोठाभित्र लगियो । चुक्कुल लगाइयो र भनियो, ‘कसको अनुमति लिएर टेण्डर हाल्न आइस् ?’ मुखमा आएजति बोल्दै कुटपिट गर्न थाले ती युवाहरुले ।
पीडित थापा भन्छन्, ‘मलाई ४ घण्टा थुनियो । पछि प्रहरीले सूचना पाएछ र प्रक्राउ गर्ने काम भयो । तर, अभियुक्तलाई यतिबेला भगाइएको छ ।’
थापाको अनुसार कुट्नु अघि अध्यक्ष महासचिवको उक्त टोलीले थापाको हातको मोबाइल पनि खोसेका थिए ।
पीडितका अनुसार महासचिव भण्डारी स्वयम् नै पटक–पटक हातपातमा संलग्न भए । कुटपिटकर्ताहरुले टेन्डर फारम फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।
तर, निर्धारित समय सकिएकाले फिर्ता लिन नसकिएको नगरपालिका स्रोतले बतायो । कन्स्ट्रक्सनका हरि भट्टराईका अनुसार दिनको १२ बजेसम्म फारम दर्ता गर्ने समयभित्र थापालाई कोठामै थुनी राखिएकाले फिर्ता लिने ठाउँ रहेन ।
भट्टराईका अनुसार त्यसपछि, कुटपिटकर्ताहरुले सोधे, ‘बिलो रेट’ कति हो ?’
बिलो रेट थाह पाएपछि उनीहरुले पनि फारम भरेको भट्टराई बताउँछन् । यतिबेला टेन्डर भरेबापत उनीहरुले फिरौती रकम माग गरिरहेका छन् ।
यस अघि उक्त टेन्डर खुले पछि १७ दिनदेखि अध्यक्ष र महासचिवको निर्देशनमा २ दर्जन बढी केटाहरुलाई होटेलमा राख्दै आइएको स्थानीय स्रोतले बतायो ।
फिरौती माग्दै उनीहरुले १७ दिनसम्म केटाहरु आएर बसेको खाएको पैसा दिनु पर्ने भन्दै धम्की आइरहेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
उनीहरुले कम्तीमा २ लाख रुपियाँ फिरौती रकम माग गरेका छन् ।
उजुरी पछिको न्याय !
पीडितले कुटपिटपछि शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय ठाटीपोखरीमा उजुरी दिएका थिए । उनीहरुले निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव भण्डारी बिरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
भोलिपल्ट शनिबार राजन सुनार, खुशी तामाङ, रोहन भट्टराइ र सन्दिप तामाङविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा थप उजुरी पीडितले दिएको छ ।
तर, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले संघ भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरु गैरव्यवसायी भएकै कारण टेन्डर भर्न नदिइएको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारी ठेक्काको सिन्डिकेट चाहिँ तोड्नु पर्दैन मन्त्रीज्यू ?
देशैभर कहाँ कति रकममा कुन ठेक्कामा भएको छ सिन्डिकेट र प्याकेजिङ हेर्न क्लिक गर्नुहोस्
शनिबार, २२ वैशाख, ०७५